Ku hel ruuxaaga xayawaanka leh kediskan! - Hanukeii
Ku soo hel ruuxaaga xayawaanka su'aalahan!
Waxay sheegaan in isku xirnaanta qofka bani aadamka ah iyo dabeecadda ay tahay xiriir aad u adag in la jabiyo. Waana caqiido soo jirtay sanado badan, had iyo jeer ku dhiirrigeliya dadka inay dib ula xiriiraan dhinacooda ugu dabiiciga ah mar kasta oo ay rabaan inay ka gooyaan oo dib u buuxiyaan. Xitaa tan iyo wakhtiyadii taariikhdii hore markii afkeenna ay inta badan matalayeen sawirro, jilayaasha ayaa ahaa xayawaan kuwaas oo had iyo jeer la socda haweenka iyo ragga horumarinta hawlahooda.
Tani waa sababta dhaqammo badani weli u sii socdaan iyagoo aaminsan in dhammaanteen aan ku dhex wadno a 'ruux xayawaan ', taasi waxay ka dhigan tahay dhinacyo ka mid ah shakhsiyaddayada. Xataa waxay tilmaamaysaa in marar badan, qayb ka mid ah dabeecadahayaga, damaca, dhadhanka, si toos ah loogu aqoonsado shakhsiyadda xayawaanka duurjoogta ah qaarkood iyo / ama guryaha.
Haddii aadan weli garanayn midka aad tahay 'ruux xayawaan ' oo aad jeclaan lahayd inaad ogaato, gudaha Hanukeii Waxaan abuurnay kedis shaqsiyadeed oo aad u gaaban kaas oo si toos ah ugu xiri doona xayawaanka ugu xiisaha badan boqortooyada xayawaanka. Diyaar?
Dhaqdhaqaaqa waa mid fudud: Waxaa jira 10 su'aalood oo la xiriira hab -raacyada, dhadhanka iyo xiisaha. Xaraf kasta wuxuu leeyahay qiime tiro (A = 1, B = 2, C = 3, D = 4). Markaad dhammeyso ka jawaabista su'aalaha, soo koob jawaabahaaga iyo dhibcaha ugu dambeeya ayaa qeexaya ruux xayawaan. Ma qabtaaMa taqaanaa qaybta ugu fiican? Waxaan haynaa koofiyado dhammaantood ah!
1. Midkee waxyaalahan soo socda ayaad ku dareentaa in lagu gartay:
2. Marka laga hadlayo nolosha bulshada (xafladaha, riwaayadaha, maqaayadaha) waxaad caadiyan doorbidaa:
A. Kaligaa tag.
B. Tag oo lammaane ahaan.
C. Koox u tag.
D. Ha tegin.
3. Dhinacyadan keebaa doorbiday inaad hore u sii qorshaysay:
A. Cuntooyinkaaga maalinlaha ah.
4. Xirfadaha, midkee ka mid ah meelaha soo socda ee aadka kuu soo jiita:
A. Farshaxanka iyo xarfaha.
B. Madadaalada iyo moodada.
C. Macluumaadka, sayniska iyo farsamada.
D. Midna kor ku xusan.
5. Miyaad inta badan maskaxdaada ku hagaajisaa xaaladaha mustaqbalka halkii aad aqbali lahayd xaqiiqda?
A. Had iyo jeer.
C. Marar yar.
6. Marka laga hadlayo dhawaaqa walxaha macdanta leh, falcelintaadu badanaa waa:
J. Uma dulqaadan karo.
B. Waxaan doorbidaa inaanan dhegaysan iyaga.
C. Waan ka helaa iyaga.
D. Waxba igama gelin inaan dhegaysto iyo haddii kale.
7. Midabka midabka ee soo socda midkee ayaad caadiyan ku aqoonsataa habka labbiskaaga:
B. Miisaanka buluugga ah.
C. Miisaanka cagaaran.
D. Miisaanka ubaxyada.
8. Ciyaaraha soo socda keebaa inta badan lagu gartaa kuwa ugu badan:
9. Qorshaha ugu fiican Axadda adiga waa:
A. Ku seexashada daawashada Netflix.
B. Dabeecadda u soco.
C. Cunto lala qaato asxaabta iyo / ama qoyska.
D. Dukaamaysiga iyo maaweelada magaalada.
10. Haddii ay tahay inaad doorato hal nooc oo cunto ah, kee baad dooran lahayd?
B. feeraha BBQ.
C. Salaad Giriig ah.
11. Erayaddan keebaa si fiican u qeexa dabeecaddaada:
A. Daring (Waxaad jeceshahay inaad halis gasho).
B. Degganaansho (Waxaad jeceshahay inaad noqoto dhexdhexaadiye waxaadna u badan tahay inaad ka walwasho waxyaabo yar).
C. Wax aan waxba tarayn (Waxaad jeceshahay inaad noqoto udub -dhexaadka oo aad qaadato masraxa dhexe).
D. Xiiso leh (Waxaad tahay qof bulshaawi ah, waxaad jeceshahay inaad wax walba ogaato).
12. Markaad xanaaqdo waxaad caadiyan ku jawaabtaa:
J. In la weeraro qofka, iyada oo aan mar kale lala hadlin.
B. Inaad xanaaqdo, inaad noqoto qof dareen leh, laakiin qirato qaladkaaga oo raali gelin ka bixisa.
C. Ka hor intaadan sheegin wax meel ka dhac ah, waxaad falanqeyn ku sameyneysaa xaaladda oo isku day inaad dhexdhexaadiso.
D. Aad bay ugu adag tahay inay kaa xanaajiyaan.
Haddii ay ku saabsanayd deggenaansho, mar walba adiga ayaan xoogga saari lahayn. Waxaad jeceshahay inaad nolosha u aragto hab fudud, waxa u soo uraya dhibaatooyinka, dagaallada ama doodaha kulama socdo. Waxaad ku raaxaysataa cunto wanaagsan iyo nasasho si aad u quudiso maalin kasta. Uma aragtid isboortiga mid aad muhiim kuugu ah, runtii, waxaad ku raaxaysataa hurdada iyo daawashada taxanaha iyo marathon -ka aad jeceshahay! Ma jiraan duufaan ku hafinaya, waxay kaaga tagayaan xeebta iyagoo wata piña colada iyo maalin qorax leh, taasi waa qorshahaaga qumman. Dhanka kale, waxaad tahay falsafad aad u xeel dheer, waxaad xarakaad u tahay xarafyada oo waxaad ku raaxaysataa waqtigaaga kaligaa.
Waxaa lagu gartaa awooddaada jireed iyo sidoo kale dareenka hooyada ee xooggan. Waxaad jeceshahay inaad ku safarto adduunka oo haddii aad keligaa samayn karto waxay soo jiidataa fiiro dheeri ah. Waxaad ka baqaysaa waxyaalo yar oo nolosha ah maxaa yeelay waxaad leedahay dabeecad adkaysi leh oo xoog leh, raadinta riyooyinkaaga iyo yoolalkaagu waa amarka maalinta. Waxaad ku raaxaysataa isboortiga iyo waxqabadyada dibedda, waxaad leedahay saaxiibo yar oo badanaaba waxaad doorbideysaa inaad ku raaxaysato qoyskaaga meelo aamusan, halkii aad ka ahaan lahayd meelo leh buuq badan.
Xigmadda dusheeda. Waxaad ka fikirtaa wax kasta oo aad samayso ama aad samaynayso, waxaad u malaynaysaa ka hor intaadan falin waxaana inta badan loo aqoonsadaa asxaabtaada inay yihiin kuwo caqli leh markay timaaddo jilitaanka. Kaas oo caadi ah in marba marka ka dambeysa, ay talo kuugu yimaadaan. Caadi ahaan waxaad keligaa wax u qabataa xaaladaha badankood, oo waxaad ku raaxaysataa aamusnaanta iyo meelaha aamusan ee leh dad yar. Waxaad tahay qof xishood badan, laakiin marka aad kalsooni ku qabtid inta badan waxaad tahay mid xiiso leh oo daacad ah, waxaad jeceshahay inaad dhageysato asxaabtaada oo aad waqti la wadaagto.
Waxaad tahay qof jecel inuu dheelitirnaado, waxaad leedahay awood aad u weyn, taasina waxay kaa dhigaysaa qof aamin ah oo la isku hallayn karo. Waxaad tahay qof jecel caddaaladda iyo runta, waxaad daacad u tahay saaxiibbadaada iyo kuwa aad jeceshahay. Waxaad jeceshahay inaad caawimo iyo hagid siiso dadka u baahan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad xoogaa taxaddar u tahay markaad aaminto dadka kale. Waxaad mar walba heegan u tahay casaanka taasi waxay halis kugu tahay adiga iyo dadka kugu dhow. Buuraha, seeraha iyo kaymaha ayaa ah meelahaaga avgiftning meesha aad caadi ahaan ku xirto ruuxaaga xayawaanka ah.
Waxaad tahay qof hal abuur leh oo ku neefsada farshaxanka wax kasta oo aad samayso. Waxaad jeceshahay shirkad, laakiin sidoo kale mararka qaarkood waxaad u baahan tahay waqti keligaa ah si aad ula timaaddo fikrado cusub. Caadi ahaan waxaad tahay wax shucuur leh oo diyaaradda caadifaddu waxay door weyn ku leedahay noloshaada. Waad ku raaxaysataa socdaalka oo garoon diyaaradeed had iyo jeer waa mid ka mid ah meelaha aad ugu jeceshahay. Waxaad jeceshahay inaad mooddo oo marba marka ka dambeysa noqoto udub dhexaadka.
Adigu waxaad tahay boqoradda badda, run ahaantii waxaad ku jirtaa dhammaan badaha adduunka. Waxaad tahay qof dareen leh oo wax garad ah. Waxaad u taagan tahay garaadkaaga, farxaddaada, saaxiibtinimadaada iyo deeqsinimadaada. Badanaa waxaad u dhaqantaa koox, waxaad jeceshahay inaad yeelato nolol bulsheed oo aad u firfircoon iyo qaar badan, BADAN, saaxiibo. Si dhaqso leh ayaad u fakartaa, laakiin sidoo kale waxaad gaartid gabagabo, waxaad jeceshahay inaad naftaada daryeesho, waxaad u muuqataa inaad leedahay qaab nololeed aad u caafimaad badan.
Haddii aan ka hadlayno shakhsiyadda iyo asalka, shaki la'aan waa adiga! Waxaad jeceshahay inaad dad ku hareeraysnaato, si aad moodo, inaad maalin kasta qorshayaal yeelato, laakiin waligaa ha u oggolaan naftaada inay ku saamayso dadka kale, run ahaantii, saaxiibbadaa ayaa sida caadiga ah kuu sheegi doona weedha caadiga ah ee: “weli waad isku mid tahay” taasna, in yar baa odhan karta. Markay dhibaatooyin jiraan, inta badan waad dhuumaaleysataa ama isku dhex jirtaa sababtoo ah ma doonaysid in qofna gooyo gariirkaaga wanaagsan. Sida aad bulsho ahaan u firfircoon tahay, waxaad sidoo kale jeceshahay inaad mar uun dhibaato gasho, laakiin mar walba waad ka baxaysaa.
Istiraatiiji, geesinimo iyo caqli badan. Waxaad la qabsanaysaa deegaan kasta oo dhulka ku yaal, aad baad u fiirsataa oo waa dheddig. Waxaad tahay qofka had iyo jeer la yimaada xal u helidda dhibaatooyinka inta badan ku adag dadka kale, waxaad jeceshahay inaad soo jeediso oo aad noqoto qof hal -abuur leh. Waxaad ku fiican tahay shaqooyinka hawlgalka iyo hal -abuurka. Waxaad ku raaxaysataa kelinimada oo la wadaag qoyskaaga. Waxaa laguu hayaa noloshaada gaarka ah. Waxaad ku kaftameysaa, muujineysaa oo xoogaa aad u daran xiriirkaaga.
Dhibcaha KA WEYN 50
Waxaad leedahay cunuggaaga gudaha ah oo had iyo jeer firfircoon, taasina waa mid aad u fiican, maadaama aad sida caadiga ah u aragto nolosha si madadaalo leh iyo muraayadaha xiisaha leh oo had iyo jeer daaran. Caadi ahaan waxaad nasiib u leedahay ku dhawaad ​​wax kasta oo aad qabato, miyaa sababta oo ah waxaad cuntaa baasaboor badan? Kaftan uun, laakiin dhaqanka bariga waxaa la og yahay in baasaboorka lacag soo jiito oo aad leedahay ujeeddooyin cad oo ku saabsan. Waad taqaanaa sidaad ula jaanqaadi lahayd naftaada gudaha oo aad u fulin lahayd mashaariic caadiyan faaiido u leh dadka kale, aadna diiradda u saaraya altruism, waxaad ka heshaa cunista, hurdada iyo… Hagaag, cunista. Waxaad tahay qof taageersan ee ma aha qof dantiisa gaarka ah wata, muusigga wanaagsan iyo wada sheekaysiga qoto dheer waa WAA IN maalin walba la joogaa.
Eeg maqaal buuxa
HAA aad u sarraysa oo saftay, maxaa yeelay iyagu waa 'madow cusub'
Haddii aad muddo ka fikiraysay sidee bay tahay habka ugu wanaagsan ee la isugu dari karo dabool Hanukeii, Waxaan rabnaa inaan ku tusno hage yar oo leh xeerar aasaasi ah oo ku saabsan waxa la xidho daboolka noocaaga ah xamuul xamuul noqo mid lagamamaarmaan ah maalin kasta. Intaa waxaa dheer, waxaan kuu sheegnaa xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan sababta qalabkan uu hadda u yahay 'madow cusub' ee qaabka waddada.
10 qof oo caan ah oo aan ka madhnayn muraayadaha indhaha
Maxaa ka dambeeya astaamahan ka socda adduunka shineemada, muusigga iyo madadaalada, kuwaas oo ka hela saaxiibkooda ugu wanaagsan muraayadaha. Waa maxay ujeeddooyinka dhabta ah ee ay adeegsadaan gafas de sol xitaa habeenkii ama gudaha? Qarsoodi dhan oo aan xallinnay. Haddii aad rabto inaad ogaato, sii wad akhriska!
10 meelaha ugu badan 'instagrammable' ee Los Angeles, CA.
Maxaan samayn lahayn annaga oo aan suurtogal ahayn in aan la wadaagno daqiiqad kasta oo safaradeena ah? Ma sugi karno inaan wax walba kuu sheegno! Munaasabaddan, waxaan kuu soo qaadannay liisaska meelaha ugu badan 'sawirrada', 'instagrammable', marka la soo koobo, mid ka mid ah magaalooyinka aan ugu jecel nahay: Los Angeles, California. Waxaan dhammaan kaaga sheegeynaa waxyaalahan cajiibka ah dhibco waxaana ku siinaa mid ama mid kale tip, haddii aad qorshaynayso inaad isaga soo booqato.